Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:4aad | FooreNews
Home Barnaamijo Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:4aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:4aad
FoorenewsNov 16, 2017Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan0
Markii uu igu yidhi makaa leexanayo ayaan aniga oo aan is ogayn bir miis dul saarnayd oo qolka taallay la soo boodday oo isku soo maqiiqay aniga oo madaxu cadho I qarxayo. Miyirkaygu caadi ma aha oo haddii aanu iga leexan oo albaabka ii bannayn waxa ay u badan tahay in aan birtaa ku dhufto oo aan madaxa bashaaqiyo. Runtii si aan ahaa isma kala ogayn oo waxa aad dareemi kartaa waxa igu dhacay. Markaa miyirkaygu caadi muu ahayn sida darteed haddii aanay iga leexan waxa ay u badnayd in aan birtaa ku dhufto. Waar Illayn Hinaasuhu waa shay cajiib ah oo aad u layaab badan. Gabigayguba waan gariiray cadho darteed iska aan kala ogayn. Kadib wuu iga leexday oo albaabkii hortayda ahaa ee aan ka soo galay ee uu taagnaa ayuu ii banneeyey. Kadib waan soo baxay. Habeenkaasi waxa I gaadhay iyo sida dareenkaygu noqday haddii aad I waydiiso Bintiyeey miyaad socotay mise gaadhi baad raacday ismaan kala ogayn. Ma sheegi karayo waxa aan gurigaasi kaga soo baxay. Miyaan soo lugeeyey? Mise Gaadhibaan ka soo qaatay jidka? Ma sheegi karo”.
Intaa Kadib Fannaanad Binti Cumar Gacal oo ka hadlaysa wixii intaasi ka dambeeyey iyo sida xaalku noqday waxa ay tidhi: “Ninkii markii aan ka soo baxay isna isla markiiba inta uu shaadhkiisii gacanta ku soo qaatay ayuu isaga oo aan xidhan iga soo daba orday. Dibbaan u jalleecay waxaanan arkay isagii oo I daba ordaya. Waxa aan ku idhi waar iga daba hadh kuma rabee iga hadh!. Isagu markaa Xaafadda Waaberi ayuu deganaa anna waxaan deganaa Xaafadda Xamar Jajab. Illaa xaafaddaydii ayuu isoo daba cararay. Xaafaddoodu waxa ay lahayd Ey aniguna Eyda waxa aan ka necebahay ma jirto. Eygoodii ayuu u foodhiyaa anna waan ka soo ordaa. Waxa uu afbuuxa uun ku yidh Eygan iyo aniga na kala dooro. Illayn Eyga ayuu igu soo dirayaa oo igu cabsi galinayaa”.
“Kadib Eygii baan ka orday oo isaga hoostiisa ayaan galay. Markaasaan ku idhi waar heedhi anigu Eygan waan ka baqanayaa ee iga celi. Inta uu isoo eegay oo indhaha igu gubay ayuu yidhi si edeb leh u soco haddaba markaasi isaga oo dhinaca kalena ii muujinaya in uu I sasabanayo. Kadib wuu I hor galay oo waxa uu doonayaa in aanu igaga hadhin meelahaasi xaafadaha dhexdooda ah oo waxa uu ii hor galay dhinacaa iyo xaafaddayadii aan ku soo socday. Kadib wuu I hor galay isaga oo Eygiisii dhinaca ka socdo, anna waan daba socdaa oo waan daba galay anoo cagaha dhulka jiidaya oo aad u tabcaansan cadho xoog lihina iga muuqato. Intaa waxa uu shubayaa hadal. Walaashayeey, anigu gabadhan waxba kama damacsanayn. Mustaqbal kama doonayo ee guriga ayuunbay nagu soo booqatay, walaaleey xidhiidhkeena marnaba xumayn maayo mana doonayo in aad sidaa igaga tagto, Mustaqbal ayaan kaa rabaa, …. ..babababaa waxaasi ayuu shubayaa. Anna dhegba uma dhigayo oo hadalkiisa maba rabo imana galayo hadalkiisu ciilbaana iga haya. Hadalkiisa miyaan dheg u dhigayaaba. Sidii aan isku soo daba soconay ayaa waxa aanu soo gaadhnay xaafaddayadii kadib Eygii wuu naga hadhay. Kadib waxa soo baxay Ey aannu lahayn oo xaafaddayada joogay. Kaasi isagu wuu I garanayaa oo waxba ima yeelo. Kadib ninkii waxa uu damcay in inta aanan guriga albaabkiisa garaacin ee aanan hore u galin in uu ila hadlo. Waan diiday. Waxa uu damcay in uu garabka I qabto oo igu dhego anna waan iska fujiyey oo waxaan diiday in uu ila hadlo aniga oo hore isku sii gundhinaya oo diiddan in aan u joogsado ama aan la hadlo. Waxa uu yidhi horta walaaleey wax aan kaa dhaadhiciyo. Anna aniga oo cadho jiq ah ayaan ugu jawaabay waar waxba ha iga dhaadhicin kuma rabee orod oo iga daba hadh, maxaad iga rabtaa naga hadh oo naga tag. Khalaas, waxa maskaxdayda ka bixi la’ meeshii aan caawa fiidkii hore ka soo tagay ee arooska ahayd sida ay ahayd iyo sida ay u shidnayd. Dadkii aan ka soo tagay ee fannaaniin iyo ka qayb galayaashii arooskaba lahaa iyo sida ay ii doonayeen ee ii rabeen iyo meeshii aan ku sii ordayay sida ay noqotay. Taasaa isku kay qaban wayday oo aan aad ula sii yaabbanaa.
Previous PostHaweenaydii Ugu Da’da Yarayd Oo Madaxweyne Noqotay, Taariikhdeeda, Halgankeedii Siyaasadeed Iyo Dalka Ay Xukunkiisa Dhawaan Ku Guulaysatay Next PostPress release: International observers of Somaliland’s presidential election on 13 November 2017 ready to deploy to Somaliland’s six regions